Qaxootiga Suuriya oo ka cabanaya mideeynta qaraabada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Annika Söder, xog-haynta wasaaradda arrimmaha dibadda Sweden. sawir: Sawirle: Karin Wirenhed/Sveriges Radio
Chamoun Malki iyo wiilkiisa Milad oo dhoowreya mideeynta qaraabadooda.
Chamoun Malki iyo wiilkiisa Milad oo dhoowreya mideeynta qaraabadooda. sawir: Sawirle: Karin Wirenhed/Sveriges Radio
Qaxootiga Suuriya oo ka cabanaya mideeynta qaraabada
Mideynta qaraabada oo ey caqabad ka haysato Suuriyaanka
La daabacay torsdag 22 december 2016 kl 07.00
Baaris ay laanta wararka Ekot ku sameeysay howlaha wasaaradda arrimmaha dibadda ayay ku caddaatay inay gaareen go'aanno ku adkeyneya soo-galootiga ka soo jeeda dalka Suuriya iyo sidii ey qaraabadood ula midoobi lahaayeen iyaga oo weliba xaq u leh sidii ey Sweden ku iman lahaayeen.
Go'aan dhaleeceeyn ballaaran loo jeediyey ayaa ah in aaney suuriyaanku mideeynta qaraaba-nimo ka dalban safaaradda uu dalkani k u leeyahay caasimadda dalka Lubnaan oo iminka dhisme ku jirta.
Mary Malki ayaa hooyadeed iyo walaalkeed ka yar ey ku sugan yihiin dalka Lubnaan, mana ay garaneeyso sidii ey ku midoobi lahaayeen.
- U maleeyn maayo inay wanaag-san tahay in qaraabada barna ey Sweden ku sugnaadaan, barna ey lubnaan ku sugnaadaan. Hooyaday ayaan halkan uga baahnahay.
Mary Malki, aabbaheed iyo laba walaalahdeed ka mid ah oo ka soo jeeda dalka Suuriya ayaa sharci deggenaansho dalka ku heley. Waxayna xaq u leeyihiin iney midoobaan hooyo, iyo wiil 14-jir ah ee ka yar oo ku sugan dalka Lubnaan.
Dalka Lubnaan ayuu dalkani ku leeyahay qunsuliyad, hase yeeshee aanay suurtagal ka ahayn in lagu qaado wareeysiyada loo baahan yahay sidii qaraabada loogu mideeyn lahaa Sweden.
Iminkadan ayaa abaabul loogu jiraa sidii safaarad uu dalkani uga furan lahaa dalka Lubnaan, hase yeshee uu maamulka dalka Sweden go'aansaday inaan wax wareeysiyo sharci doon ah aan lagu qaadin.
Anders Sundquist kana mid ah howl-wadeennada ka howl-gala xafiiska talo-bixinta soo-galootiga ayaa dhaleeceeyn ballaaran middaa dusha uga tuurey.
- Waa wax aan caqliga geli karin In meesha safaarad ugu dhow aan laga cod-san karin mideeynta qaraabada.
Waddammo kale oo safaarado ku leh lubnaan ayaa suuriyaanka u ogolaada in wareeysiyo halkaa looga qaado, waana mid u suurta-gelisa iney viisa ku meel-gaar ah ku yimaadaan sidii ey wareeysiyadaa u mari lahaayeen. (OBS! Dubbelkolla)
Wasaaradda arrimmaha dibadda sweden ayaa go'aan ku gaartay in qowmiyadda suuriyaanku deggenaansho ka dalban karaan un shan safaaradood oo uu dalkani ku leeyahay dalka dibaddiisa. Halka dhanka kale kolkii go'aankaa la gaarayey lagu soo rogey viiso sidii ey waddammadaa ku geli lahaayeen, waana mid aan suurtagal u ahayn sidey ku gaari lahaayeen.
Bulshada suuriyaanka ayay suurtagal u tahay iney viiso la'aan ku galaan waddammada qaarkood , hase yeeshee aaney dalalkaa ku geli karin wareeysiyada looga baahan yahay sidii ey qaraabadood Sweden ula midoobi lahaayeen.
Sidoo kale wasaaradda arrimmaha dibadda ayaa go'aansatay in aaney safaaradaha metelaa xiriir la sameeyn hayadaha waddammadaasi sidii loogu sahli lahaa iney dalkaa soo galaan suuriyaanku.
Mary Malki hooyadeed iyo wiilka ka yar ee la dhashay ayaa lagu war-geliyey iney socdaal ku tagaan safaaradda uu dalkani ku leeyahay waddanka Joordan, waana waddan aaney suuriyaanku si sahal ah ku geli karin.
- Waali weeye mana ahan mid sahlan. Qaraabadayadana waan u xiisney oo aan u baahannahey.
Annika Söder, ahna xog-haynta wasaaradda arrimmaha dibadda ayaa sheegtay iney iminka ku talo jiraan sidii suuriyaanka loogu sahli lahaa in wareeysiyo lagula yeesho waddammo ey u sahlan tahay sidii ey ku geli lahaayeen. Iyo sidoo kale in dib u eegis lagu sameeyo howlaha s afaarradda dalkan u metesha Lubnaan.
- Sannad dabadeed kolka ay safaaraddu furan tahay ayaa dib u eegis lagu sameeyn doonaa howlaha safaaradda. Waana mid aan kuu xaqiijin karo inay sidaa wax u dhici doonaan.
- Laakiin dagaalka Suuriya iminka ayuu ka socdaa. Maxaad la sugeeysaan?
- Dib u eegis ayaannu ku mashquul-sannahey. Waa howl ballaaran in safaarad hor leh la furo, dhaqaale badan ayaa ku baxa. Inkasta oo iminka qunsuliyadda carrigaa ka jirtaa qabato howlo wax ku ool ah. Sidaan horay kuugu sheegeyna howlo badan ayaan gacanta ku heynaa iyo goobta ey suuriyaanku ka dalban lahaayeen mideeynta qooysaska.
Dadyoowga dooneya iney qaraabadood kula midoobaan Sweden ayey lagama maarmaan u tahay iney wareeysi ka galaan safaarad ka mid ah safaarradaha uu dalkanik u leeyahey dalka dibaddiisa.
Kuleeylihii ina dhaafey ayay wasaaradda arrimmaha dibaddu go’aan ku gaartay in suuriyaanku ka dalban karaan mideeynta qaraabada safaarradaha uu dalkani ku leeyahey shan waddan oo keliya. Kuwaasina oo kala ah waddammada: Masar, Joordan, Turkiya, Boqortooyada Sacuudiga iyo isu-tagga imaaraadka.
Wasiirka arrimmaha dibadda Sweden Margot Wallström ayaa qalinka ku duugtay go’aankaa, hase yeeshee kolkii go’aankaa la gaarey ayey waddammadaasi viiso ku soo rogeen suuriyaanka. Waana midda ku adkeeysey suuriyaanku iney wareeysiyo qaraabadood ey kula midoobeyaan ka galaan waddammadaa.
Bulshada suuriyaanka ayey u sahlan tahay iney waddammada qaarkood si sahlan ku galaan, sida waddammada Suudaan, Iiraan, Malaysiya iyo Nayjeeriya. Waddammadaasina oo ey ku sugan yihiin safarrado iswiidhish ah ayaaney suuriyaanku suurtagal u ahayn iney wareeysiyo ku galaan ey ku codsaneyaan sidii ey qaraabadood ula midoobi lahaayeen.
Sannadka foodda innagu soo haya ee 2017 ayuu dalkan Sweden ku talo jiraa siduu safaarad uga furan lahaa dalka Lubnaan. Hase yeeshee ay wasaaradda arrimmaha dibaddu go’aan ku gaartay in aaney suuriyaanku wareeysi ku geli karin safaarraddaa. Suuriyaanka ayaa viiso ku mel gaar ah ku heli kara dalka Lubnaan, halka ey waddammo EU xubno ka ah u ogol yihiin iney safaarradahooda dalka Lubnaan ey wareeysiyo ku galaa.
Wasaaradda arrimmaha dibadda ayaa sidoo kale go’aamisay in aaney howl-wadeennadoodu xiriir la sameeyn hayadaha waddammadaasi. Middaasina oo u sahli lahayd iney waddammadaa soo galaan siiriyaanku.